एशियाकै धनि अम्बानी र उनको कम्पनी १ मिनेटमा १.७६ करोड रुपैयाँ कमाउँछन ? —
२० श्रावण २०७८, बुधबार ११:१७ admin
काठमान्डौ : एक मिनेटको समय निकै कम हुन्छ । तर ६० सेकेन्डको यही समय भारतका सबैभन्दा धनी व्यवसायी मुकेश अम्बानी र उनको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका लागि निकै महत्त्व राख्दछ ।
किनभने अम्बानी र उनको कम्पनीले प्रत्येक मिनेट १.१ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाउँछ ।अम्बानी परिवारसँग ८१.३ अर्ब डलरको सम्पत्ति रहेको छ । यो विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा धनी परिवार हो ।
ई–कमर्स कम्पनी वालमार्टका सह–संस्थापक वाल्टनको परिवार सँग २१५ अर्ब डलरको सम्पत्ति रहेको छ । उनीहरू यो सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेका छन् । यो जानकारी इन्भेस्टोपिडियाले सन् २०२१ को जनवरीमा प्रकाशित गरेको थियो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मुकेश अम्बानीले सन् २००८–०९ देखि हरेक वर्ष १५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको तलब लिन्थे । सन् २०२०–२१ देखि भने उनले तलब नलिने घोषण गरेका थिए ।
उनले डिभिडेन्डको रूपमा प्रति शेयर ७ रुपैयाँ पाउँछन् । यसबाट उनको आय १ हजार ९८८ करोड भारतीय रुपैयाँ रह्यो ।जुनको त्रैमासिकमा मात्र रिलायन्सले १८ हजार ८०६ करोड भारतीय रुपैयाँको नाफा गरेको थियो । रिलायन्सले प्रतिघण्टा ६५ करोड भारु आम्दानी गर्दछ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! रणबीर कपूरले जब दीपिका मेरा लागि दाल-भात जस्तै थिइन भने
एजेन्सी / यो सबैलाई थाहा छ कि बलिउडका रणबीर कपूर र दीपिका पादुकोण कुनै एक समयमा प्रेम सम्बन्धमा थिए। दुवैले सार्वजनिक रुपमै आफू हरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको बताएकाaथिए।
उक्त जोडी लाई दर्शकहरुको प्रेम समेत मिलेको थियो। धेरै चलचित्रमा रणबीर र दीपिकाको जोडी लाई दर्शकले रुचाएका थिए।दीपिका रणबीर लाई यति सम्म प्रेम गर्थिन् कि उनले आफ्नो गर्दनमा ट्याटु नै बनाएकी थिइन्।
रणबीर पनियो दीपिकालाई कम मायाँ गर्दैनथे। विभिन्न अवसरमा उनले दीपिका प्रति आफ्नो प्रेम दर्साइसकेका छन्।एक अन्तर्वार्तामा उनले दीपिका आफ्ना लागि दाल-भात जस्तै रहेको बताएका थिए।
घर बाहिर हुँदा जति नै स्याण्डविच, बर्गर खाएपनि पेट भर्न दाल-भात नै चाहिएजस्तै दीपिका पनि आफ्नो लागि त्यस्तै रहेको बताएका थिए।“घर बाहिर हुँदा जति नै स्याण्डविच, बर्गर खाएपनि घर पुगेपछि हामीलाई पेट भर्न दाल-भात नै चाहिन्छ।
,एक अन्तर्वार्तामा रणबीरले भनेका थिए,”हो मेरा लागि दीपिका पनि त्यति हुन्। मेरा लागि दीपिका घरको दाल-भात जस्तै थिइन्।”विभिन्न कारणले गर्दा दीपिका र रणबीरको सम्बन्ध लामो समय चल्न सकेन।
ब्रेकअप भएपछि पनि दीपिका र रणबीरले एक अर्का प्रति सम्मान जताउने गरेका छन्। रणबीर दीपिकालाई बलिउडकै टप नायिकाको रुपमा लिन्छन्। केहि अन्तर्वार्ताहरुमा उनले दीपिका प्रति सम्मान रहेको स्पष्ट रुपमा बताइसकेका छन्।
ब्रेकअप पछि टुटेकी थिइन् दीपिका
सम्बन्ध टुटेपछि दीपिकालाई पर्नु पिर परेको थियो। त्यससमयमा उनी डिप्रेशनमा समेत गएको बताउने गरिन्छ। डिप्रेशनबाट बाहिर निस्किन उनलाई लामो समय नै लागेको थियो।
पछि चलचित्र ‘रामलीला’मा उनको भेट रणवीर सिंहसँग भयो। सोहि चलचित्र पश्चात उनीहरु नजिक भए र ६ वर्ष एकअर्कालाई डेट गरे। सन् २०१८ मा उनीहरुको विवाह भयो। अहिले रणबीर कपूर आलिया भट्टसँग प्रेम सम्बन्धमा छन्।
रणबीर कपूरले जब दीपिका मेरा लागि दाल-भात जस्तै थिइन भने …
१० आश्विन २०७८, आईतवार ०४:४२ admin 0
बेलायती सेनामा भिसी पाउने पहिलो गोर्खा सैनिक कुलवीर थापामगरको सालिक अनावरण गरियो
लण्डन । बेलायती सेनामा भिक्टोरिया क्रस ९भिसी० पाउने पहिलो गोर्खा सैनिक कुलवीर थापामगरको सालिक अनावरण गरिएको...
१ भाद्र २०७८, मंगलवार ११:११ admin 0
न्युजिल्यान्डमा १ जनामा कोरोना सं’क्रमण भेटिएपछि देशभर लकडाउन
काठमाडौँ । एक जनामा को’भिड १९ सं’क्रमण देखिएपछि न्यूजिल्यान्डमा लक’डाउन घोषणा गरिएको छ। ६ महिनामा पहिलो...
७ श्रावण २०७८, बिहीबार ०८:४९ admin 0
काठमाडौं -नेपाली कामदारका लागी आकर्षक रोजगारको गन्तब्य मानिएको दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुनः तीव्र गतिमा...